तिथि मेरो पत्रु » शीर्ष 10 फोटो भूलों
पछिल्लो पटक अद्यावधिक गरिएको: Mar. 30 2020 |3मिनेट पढ्न
यो कुनै-बात सूची निम्न लामो समय अनलाइन daters संग साक्षात्कार र व्यापार अधिकारी र धेरै प्रमुख अनलाइन डेटिङ सेवाहरूको समर्थन कर्मचारी देखि संकलित थियो. तल लाइन के? अनलाइन डेटिङ को एकल सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण भाग कसरी तस्बिरहरू आफूलाई प्रतिनिधित्व को सरल कार्य ह्यान्डल छ.
1. फोटो मा सबै पोस्ट छैन. पोस्ट सबै मा एक फोटो यकीनन सबैभन्दा गम्भीर गल्ती हो. आफ्नो फोटो एक रिक्त स्थान छ भने तपाईं लुकाउने कुरा हुनै पर्छ. हामीलाई भरोसा, सबैलाई त सोच्छ. अनि त्यो jaundiced वाक्यांश “मेरो तस्वीर को लागि सोध्नु” यी दिन राम्रो लङ्गडो बजाइरहेका छ. शब्दमा आफैलाई वर्णन लङ्गडो छ, पनि.
2. भन्दा बढी छ कि एक फोटो पोष्ट2वा3वर्ष पुराना. तपाईं आफ्नो चित्र भन्दा पनि धेरै ठूलो हो भने तपाईं को पाप छु “उमेर दाह्री काट्ने” अनलाइन. यो सुरु देखि अस्थिर भुइँमा आफ्नो सम्बन्ध राख्न प्रत्याभूति र सामान्यतया एक पल छ “ब्रेकर सम्झौता।” त्यो दोस्रो मिति हुन्छ कहिल्यै किन आजसम्म आश्चर्य? यो तिनीहरूले तपाईं यदि तपाईं सक्दिनँ पक्का शर्त हो “उमेर खौरे”.
3. पृष्ठभूमि मा कि सानो आंकडा छ तपाईं? आफ्नो छवि धेरै सानो छ भने तपाईं बट-कुरूप हुन वा लुकाउन केही हुनै पर्छ स्पष्ट देख्न सकिन्न. ब्लेड. आफैलाई को एक वास्तविक फोटो प्राप्त. हामी पहिले देखि नै योसेमाइट देखेका छौँ – व्यक्ति मा.
4. एक अनौठो वा नासमझ अभिव्यक्ति संग फोटो प्रयोग गरेर सम्झौता गर्न. मात्र एकदम बंद भने, थोडे’ तपाईं बस unmentionable केहि बदबू जस्तै तपाईं आफैलाई छन् स्पष्ट चित्र देखिन्छ, यो एक राम्रो फोटो लागि समय छ. आफ्नो प्रोफाइल मा शेक्सपियर समेत गद्य मात्तिएकी सृष्टि गर्नुभएको भयानक पहिलो छाप हटाउन सक्दैन, या बुरा, कि खूंखार “हेडलाइट्स मा deer” हेर्न.
5. तपाईं कि छ – वा बायाँ तपाईं मा एक छ – वा पृष्ठभूमि मा एक छ तपाईं? तपाईं किन गाला कि अनौठो-देख मानिस चुंबन छन्? आफ्नो गधा मा आफ्नो हात त्यस मानिस को हो? ती आफ्नो आमाबाबु हुनुहुन्छ? हामी अनुमान छ भने वा तपाईं आफ्नो प्रोफाइल पाठ मा यो व्याख्या गर्न छ भने, ढिलो. यो तपाईं भन्दा बढी मान्छे संग एक फोटो पोस्ट जोगिन प्रयास, विशेष गरी यदि अन्य व्यक्ति(को) विपरीत लिङ्गको हो, तापनि तपाईं को फोटो राम्रो छ विचार.
6. ती घाम उडान. गुप्त जाँदै हामी? जो हलिउड खेल?घाम लगाएका बस तपाईं लुकाउने केहि सुझाव.
7. पार्टी Youat, टाउको हाँसो मा फिर्ता फेंक, हात मा बियर, तपाईं puke हामीलाई धेरै मजा havingso. यो हामी तपाईं getdrunk र पार्टी भनेर विश्वास छ कि छैन5रात एक हप्ता, तर किन हामी मौका लिनुपर्छ.
8. आफ्नो आमा वा भाइ भरोसा राख्दा तपाईं अनलाइन shoulduse जो फोटो तपाईं बताउन. तपाईंको आमा पनि आफ्नो goofiest चित्र looksabsolutely आकर्षक सोच्छ. तपाईंको दृष्टिकोण पक्षपाती छ, पनि. तपाईं विचार photothat त्यो मनपर्ने साँच्चै देखिन्छ, साँच्चै राम्रो छैन, हुन सक्छ. बरु, के तपाईं अनलाइन shoulduse जो फोटो आकर्षक पाउँछन् someoneof विपरीत सेक्स सोध्न. त्यो आफ्नो photo'seffectiveness को सबैभन्दा सही उपाय हो. किन? तपाईं अनलाइन आफ्नो फोटो पोस्ट गर्दा, you'llbe बस यस्तो मान्छे impressing – वा तिनीहरूलाई impressing छैन – एक एक दिन thousandtimes.
9. Showingtoo धेरै छाला. यो सिर्फ गलत प्रतिक्रियाहरू you'rea महिला भने तपाईं प्राप्त हुनेछ, र तपाईं एक मानिस छौं सबै भने मा सामान्यतया कुनै प्रतिक्रिया. त्यहाँ areexceptions, तर धेरै छैन.
10. आफ्नो भद्दा फोटो प्रयोग तपाईं professionalphotos प्रयोग लाग्छ किनभने “जाँचमा चोर्ने”. व्यावसायिक गुणवत्ता प्रयोग पहिलो कुरा अनलाइन डेटिङ विशेषज्ञहरु गम्भीरतासाथ अनलाइन डेटिङ takeyour भने तपाईं के सुझाव photosis. तपाईं पक्कै आफ्नो स्वास्थ्य भरोसा छैन,एक शौकिया आफ्नो दृष्टि वा आफ्नो बाल. त्यसैले किन एक आफ्नो अनलाइन छवि भरोसा? Professionalphotos संग एक स्थायी पहिलो छाप बनाउने अगाडी आफ्नो सर्वश्रेष्ठ अनुहार राख्न एक समझदार तरिका हो.
एक पहिलो तारीख मा कसले तिर्नुपर्छ – पुरुष लागि सल्लाह
छोडपत्र मेड पछि एक युवा महिला डेटिंग
सदस्य सुरक्षा हाम्रो प्राथमिकता हो